Temple Keegga Keega - Joornaalka Naqshadeynta
Keegga Keega Laga soo bilaabo caan ku sii kordheysa ee ku dubista guriga waxaan arki karnaa baahi loo qabo istaegis casri ah oo casri ah, oo si fudud lagu keydin karo armaajo ama sawir. Way fududahay in la nadiifiyo oo weelka maydha weelka. Macbadka wuu fududahay in la isugu yimaado oo la fahmo iyada oo lagu ridayo taarikada bartamaha laf-dhabarka. Ka takhalusiddu way fududahay adigoo si fudud dib uga riixaya iyaga. Dhammaan 4ta shey ee ugu waaweyn waxaa wada qabta Stacker. Qalabka wax lagu dhejiyaa wuxuu ka caawiyaa inuu isku wada hayo dhammaan ashyaa'da loogu talagalay kaydinta is haysta ee wejiga badan leh. Waxaad u adeegsan kartaa isku-habeyn saxanka kaladuwan wakhtiyo kala duwan.
Magaca mashruuca : Temple, Magaca naqshadeeyayaasha : Chris Woodward, Magaca macmiilka : CWD ltd .
Keegga Keega Chris Woodward Temple